Petite Vitesse : Voasambotra ireo mpangala-jaza telo lahy -
AccueilSosialyPetite Vitesse : Voasambotra ireo mpangala-jaza telo lahy
Petite Vitesse : Voasambotra ireo mpangala-jaza telo lahy
15/09/2018 admintriatra Sosialy 0
Nahazo vahana tato ho ato ny resaka hala-jaza teto an-drenivohitra sy tany amin’ny faritra. Ireo zaza menavava no tena lasibatra tamin’izany. Lehilahy iray sy vehivavy roa no nosamborin’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona, voarohirohy tamin’ny resaka hala-jaza teny amin’iny manodidina ny “Petite Vitesse” iny, ny alarobia teo.
Fitarainana tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera no nahitana fa zaza halatra no namidy tamina mpivady tsy manan-janaka. Roboka tokoa ireo farany izay efa nitady zaza hatry ny ela, ka nividy izany mitentina 8 Hetsy Ariary. Tsiahivina fa zaza vao telo volana ity farany no very teny amin’ny reniny. Raha ny zava-nitranga dia niharan’ny fandraikiraikena ilay renim-pianakaviana raha nifanehitra tamina roavavy teny an-toerana. Ny antoandron’ny 6 septambra lasa teo teny amin’ny Petite Vitesse no niseho izany. Araka izany nitady mpanampy hitaiza ny zanany teny an-toerana ity farany ka nanantona azy ireo roavavy. Nilaza ireto mpangalatra fa mahita vehivavy
« mpanampy » ho an’ilay renin-jaza. Raikitra ny dia an-tongotra nandritra ny fotoana lavalava nitondran’ireo olona azy. Raha sendra hividy fahana finday teo amin’ny manodidina kosa ilay reniny, dia nangatahin’izy roavavy hotrotroina ilay zazakely sao reraka ity reniny. Segondra vitsy taorian’izay anefa no efa tsy teo intsony ireo mpisoloky. Nametraka fitoriana teo anivon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona tetsy Tsaralalàna avy hatrany ireo ray aman-drenin’ilay zaza taorian’izay. Natao ihany koa ny fametrahana ny peta-drindrina ho fikarohana ireo olon-dratsy ary naparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera, ka izay no nahitan’ireo mpividy fa halatra ilay zaza novidiana. “Nahita ilay fikarohana niaraka tamin’ny sarin’ilay zaza tao amin’ny facebook izahay tamin’ny fotoana nahazoana azy. Nampandre ireo ray aman-dreniny izahay avy eo fa aty aminay ny zaza”, hoy ireo mpivady nividy zaza halatra.
Marihina fa zaza vao telo volana monja ity nangalarina ity. Ny ampitso dia nifanao fotoana tany amin’ny kaomisaria izy ireo. Tamin’ny fizahana dia voamarina fa tena ilay zaza very io hita io. Nolazain’izy mivady nitana azy fa lehilahy iray monina eny Analamahitsy no atidoha nivarotra ilay zaza. Nosamborina avy hatrany ralehilahy ary dia niaiky fa nanao ny heloka. Nanondro ireo roavavy voasaringotra tamin’izany ity farany, ka noraisim-potsiny izy ireo. Tao anatin’ny fanadihadiana no nahalalàna fa ny iray amin’ireo roavavy voasambotra dia efa mpivaro-janaka. Fantatra izao fa niverina indray ny hala-jaza, na eto an-drenivohitra, na any amin’ny faritra. Nisy ny fahaverezana zaza maro tato ho ato, saingy tafaverina andro vitsy taorian’izay. Nandeha ny fanakianana rehetra fa ireo renim-pianakaviana no mitavozavoza manoloana ity tranga ity. Raha tsy hilaza afa-tsy ilay zaza vao roa volana teny Ambohidratrimo nisy nangalatra rehefa nampitazonin’ny reniny vehivavy tsy fantatra raha izy sendra poritra iny. Teo koa ilay zaza teraka vao telo andro tao amin’ny toeram-pitsaboana tany Mahajanga, andro vitsy lasa izay. ity farany izay mampametra-panontaniana ihany hoe taiza ireo mpitsabo tompon’andraikitra tamin’ny zava-nitranga. Izay ahiana mety ho mpitsabo ihany no tompon’antoka, satria nanao fitafian’ny mpitsabo.
Zavatra tena miantoka ny ain-dehiben’ny mponina any Ambilobe mihitsy no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa hataony. Nandritra ny fidinana ifotony izay nataony taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim farany teo izany. Isan’izany ny fanavaozana iray manontolo ny ...Tohiny